China PROTMEX PTH-8 Smart Indoor Digital Quality Quality Detector Portable WIFI CO2 Meter orinasa sy mpanamboatra | Protech
PROTMEX PT19D Digital Hygrometer Indoor Thermom ...
PROTMEX PT201B Temperature anaty trano an-kalamanjana mand ...
PROTMEX PTH-8 Smart Indoor Digital Quality Quality Detector Portable WIFI CO2 Meter
Ny detector carbon dioxide dia mandray sensor NDIR, izay afaka mandrefy ny mari-pana sy ny hamandoan'ny dioksidan'ny karbaona. Mandritra izany fotoana izany dia afaka maneno fanairana koa izy ity, mifandray amin'ny wifi ary mijery ireo data amin'ny alàlan'ny fampiharana
Fampiasana Wifi: Eny
Temperature ： -10 ~ 40 ° C (± 2 ° C)
Humidity ： 20% -80% (± 5% RH)
Famatsiana herinaratra: bateria lithium 2400mAh
Vokatry ny vokatra: 10 * 8.6 * 4.3cm
Fomba fampidirana mora azo (Hang / latabatra fametrahana)
Batterie lithlum Builtin (Mode: 18650 / Capacity2400mAh)
1. Manohana ny sensor NDIR;
2. Ny fisehoana dia manana fahatsapana teknolojia avo lenta toy ny vy, ary milamina ny endrika, mety amin'ny fanomezana an-trano;
3. Kely sy maivana, mora entina;
4. Bateria lithium 2400mAh manana habe lehibe;
5. Vokatra maro samihafa, izay azo refesina ihany koa ny mari-pana sy ny hamandoana;
6. Azonao atao ny mampifandray wifi hijerena lavitra ireo fanovana data
Fanamarinana lehibe: CE / RoHS / FCC
Fahaiza-mamokatra matanjaka: ny fotoana famokarana dia 15 ~ 30 andro
Manaova hery fikarohana sy fampandrosoana: ny vokatra dia noforoninay ary novolavolaintsika
Ny tsipika famokarana anay
F: Iza isika?
A: Ny orinasanay dia Protech International Group Co., Ltd. Mahatsapa fankasitrahana fa manana izany fahafaha-miasa izany hiara-miasa aminao atsy ho atsy.
F: orinasa sy famokarana ve ianao?
A: ENY. Orinasa izahay.
F: Inona ny vokatra amboarinao?
A: Detector kalitaon'ny rivotra toy ny metatra CO2 sy metatra HCHO, tobin'ny toetrandro, thermométer ary hygromètre, anemomètre, metatra haavo feo, tester hamandoana hazo, metatra maivana, mpamantatra fivoahan'ny entona ary mpamantatra voltatera sns.
F: Inona no tombony azo amin'ny vokatrao?
A: Ny vokatray dia noforonin'ny ekipa mpamorona anay. Saika ny vokatra ananantsika Patent Right.
F: Inona ny MOQ amin'ilay entana?
A: Matetika ao anaty tahiry ny entana, azo ekena ny habetsany. Azafady mba manontania anay alohan'ny filaharana.
F: Azontsika atao ve ny manamboatra sary famantarana amin'ny zavatra?
A: eny, manana atrikasa fanontana any amin'ny orinasa izahay. Raha mbola manome rakitra Logo ianao dia hanao sary ho anao aloha izahay, avy eo manaova santionany hanamafisana.
F: Azontsika atao ve ny manamboatra fonosana tsy miankina?
A: eny, tsy olana izany. Hanome anao drafitra famolavolana AI fonosana izahay. Azonao atao ny manamboatra fonosana fonosana. Avy eo izahay dia hamokatra santionany ho anao hijerena, aorian'ny fanamafisana dia hamokatra vokatra arakaraka ny fonosanao izahay.
Teo aloha: PROTMEX PTH-5 Wall Mount Digital Carbon Dioxide Monitor ny mari-pana amin'ny kalitaon'ny rivotra RH CO2 Meter Sensor Controller
Manaraka: PROTMEX PT20A Weather Station Digital Wireless Indoor ivelan'ny trano Thermometer Hygrometer Forecast amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny Toetrandro Weather Barometer
PROTMEX PTH-1 Famaritana avo lenta Formaldehy ...
PROTMEX PTH-4 Fivarotana hafanana mafana sy Hygromet ...